Vaovao - Amerika Latina (Brezila) fampisehoana sakafo iraisam-pirenena ho an'ny taona 2019
Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd dia nanatrika ireo akora sakafo any Amerika atsimo 2019 nanomboka ny 20-22 aogositra 2019 tao Sao Paulo, Brezila. Amin'ny maha-iray amin'ireo tsena vaovao ho anay, dia nanondrana ny entanay ho an'ny mpanjifany any Amerika atsimo izahay, izay manolo-tena amin'ny vokatra hena sy ronono. Izahay dia nizara tsikelikely tao amin'ny Brazil sy Arzantina koa.
Fotoana fampirantiana: 20-22 Aogositra 2019
Toerana fampirantiana: Sao Paulo, Brezila
Vokatra fampirantiana: Agar Agar; Carrageenan
Kitapo fampirantiana: indray mandeha isan-taona
Fampidirana ny fampirantiana:
Fampiroboroboana ny sakafo ara-tsakafo sy ny teknolojia amerikana atsimo amerikana (Fi E Hi 2019) nokarakarain'ny CMP Business Media tao amin'ny Expo Center Avaratra ao Sao Paulo, Brezila. Ho fampirantiana momba ny indostrian'ny sakafo any Amerika atsimo, fi amerika atsimo ary hi amerika atsimo Natao nifandimby, natambatra ny Fi sy ny Hi. Hiaraka amin'ny hetsika CPHI SOUTH AMERICA, ny SOUTH American World Pharmaceutical Raw Materials Fair. Ny fampisehoana dia iray amin'ireo seho fitaovam-panafody lehibe indrindra any Amerika Latina ary hatao mandritra izany fotoana izany ary apetraka toy ny FISA, ny fampisehoana ho an'ny sakafo iraisam-pirenena amerikana atsimo 2015 any Brezila.
Mandrakotra velaran-tany mihoatra ny 20.000 metatra toradroa, nahasarika mpitsidika matihanina 11255 ny Show 2018 Ingredients Show, ary marika marika sakafo maherin'ny 500 no tonga mba hampiroborobo ny vokatra sy ny haitao vaovao. 83% amin'ireo orinasa mpandray anjara no nanamafy ny vokatry ny fampirantiana. mino fa ny fampiratiana dia nahatratra ny andrasan'ny fandraisan'anjaran'izy ireo ary nahitana valiny nahafa-po. 94% amin'ireo orinasa no nino fa ny fampirantiana dia nahafahan'izy ireo nihazona ireo mpanjifany ankehitriny, mivelatra folo heny, ary manamafy ny fankasitrahana ny marika, ka nahatonga azy io ho fomba tsara hampiroboroboana orinasa.